IGuadalest, idolobha lamaphupho esifundazweni sase-Alicante | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | | Izindlela zokuphunyuka, España
IGuadalest ingelinye lamadolobha ahlukile futhi amahle kakhulu Isifundazwe sase-Alicante. Itholakala esifundeni se- UMarina Baja, onhlokodolobha yakhe I-Villajoyosa, kepha ayinalo ugu. Ngokuphambene nalokho, itholakala egqumeni futhi izungezwe izindawo eziphakeme kunazo zonke endaweni njenge ISierra de Aitana igagasi le iXortà.
Kumenyezelwe Indawo Yomlando-Yobuciko ngo-1974, iGuadalest nayo iyingxenye yenethiwekhi ye- Amadolobha amahle kakhulu eSpain. Ebuswa yinqaba yayo ehlaba umxhwele, ukuhamba emigwaqweni yayo emincane yezindlu zabamhlophe nokuvakashela iminyuziyamu yayo kuzokunikeza okuhlangenwe nakho okuhlukile. Uma ufuna ukwazi kangcono ICastell de Guadalest, njengoba leli dolobha libizwa ngempela, sikukhuthaza ukuba uqhubeke ufunde.
1 Yini ongayibona eGuadalest
1.1 Isigodlo saseGuadalest
1.2 Isonto le-Our Lady of the Assumption
1.3 Indlu ka-Orduña
1.5 Iminyuziyamu yaseGuadalest
2 Okufanele ukwenze edolobheni lase-Alicante
3 Ongakudla eGuadalest
4 Ungafika kanjani edolobheni
5 Yisiphi isikhathi esihle sokuvakashela eGuadalest
Yini ongayibona eGuadalest
Ngaphandle kokujabulela ukubukwa okuhlaba umxhwele okunikezwa yi-its imibonoEGuadalest unelifa lesikhumbuzo elihehayo kanye nethuba lokwenza eminye imisebenzi. Sizokukhombisa ukuthi yini ongayibona edolobheni lase-Alicante.
Futhi ubizwa isigodlo san san jose, iyinqaba endala yamaSulumane kusukela ngekhulu le-XNUMX. Yakhiwe endaweni ephakeme kakhulu yedolobha, yayinokubaluleka okukhulu kwezamasu phakathi neNkathi Ephakathi. Kodwa-ke, ukuzamazama komhlaba okubili kanye nezingxabano ezifana neMpi Yenkululeko kubangele isimo sayo samanje, cishe saba yincithakalo. Kodwa-ke, usengavakashela izinsalela zakhe.
Isonto le-Our Lady of the Assumption
Eyakhelwe ngekhulu le-XNUMX leminyaka kulandela imigomo ye i-baroque, Iphinde yathola umonakalo owaphoqa ukuyibuyisela ngo-1962 isusa i-cupola yayo kanye ne-transept yayo. Ngaphakathi aqokomisa okuyigugu ngobe kudalwe ngumenzi wekhabhinethi UJose Maria Moya nomdwebi UDavid Pastor. Njengoba igama lesonto likhombisa, limele ukubhengezwa kanye nempilo kaJesu Kristu.
Kuyisakhiwo esikhulu esihle kakhulu eGuadalest. Yakhiwa ngemuva kokuzamazama komhlaba kwe-1644 futhi iqanjwe ngomndeni wakwa-Orduña, owabusa idolobha iminyaka engamakhulu amathathu. Okwamanje ikomkhulu le- iMnyuziyamu kamasipala Ikhombisa ifenisha yekhulu le-XNUMX, imidwebo yekhulu le-XNUMX, amaqoqo e-ceramic, amamephu, izithombe zokuvuna nezinye izinto eziningi.
Ngokumangazayo, esitezi esiphansi seHholo LeDolobha laseGuadalest ungavakashela nejele elidala lekhulu le-XNUMX eliholela ekutheni sikutshele ngeminyuziyamu yendawo ngoba kukhona eyodwa ezinikele ngqo kumathuluzi okuhlukumeza asendulo.
Kanye nobuhle obukhulu baleli dolobha lase-Alicante, uzomangala inani le iminyuziyamu enelukuluku lokufuna ukwazi inikelwe isivakashi. Sesivele sishilo nge- Umlando WangeNkathi Ephakathi, ngezinto zalo eziphazamisayo zokuhlukumeza kanye nangeCasa Orduña. Kepha kukhona okunye okumangalisa ngokwengeziwe.
Kuyindaba ye- imyuziyamu ye-microgiant, lapho ungabona khona izithonjana ezimangazayo. Isibonelo, eyakwaGoya ethi 'The Execution of May Two' ohlamvwini lwelayisi, inkunzi eyakhiwe ekhanda likaphini noma iSitatimende Sokukhululeka ngaphakathi embotsheni yenaliti. Konke kuyindalo yomculi UManuel Ussá, uthathwa njengomunye wama-microminiaturists aphambili emhlabeni.
Akukho okufunayo ukwazi ukuthi i- I-Bethlehem Museum kanye namaDola lapho ungabona khona amathoyizi amaningi amadala nesimo sendawo yokuzalwa kwemvelo. Futhi kungashiwo okufanayo imnyuziyamu kasawoti kanye noshiki bopele, equkethe izingcezu ezingaphezu kwezinkulungwane ezingamashumi amabili, ezinye zazo ezisukela eminyakeni eyi-1800 eyedlule.
Ngakolunye uhlangothi, inhle ngokufanayo i- Umnyuziyamu we-Ethnographic, ebuyisa impilo yabakhileyo esigodini saseGuadalest esikhathini esedlule. Izingubo ezijwayelekile, ifenisha nezitsha zokusetshenziswa kwansuku zonke kwakha izinto ezikhonjisiwe kule ndawo.
Ngaphakathi kwendlu ka-Orduña
Ekugcineni, i iqoqo lemyuziyamu lezimoto zomlando Ikhombisa izithuthuthu eziyi-140 nezimoto zokuvuna egumbini elihle. Uzothola lapha ezinye izingcezu zesikhathi esedlule ezifana nemishini yokuthunga, izingcingo, imisakazo kanye nabenzi bekhofi.
Okufanele ukwenze edolobheni lase-Alicante
Ngaphezu kokuvakashela izikhumbuzo zayo neminyuziyamu, idolobha lase-Alicante liyindawo efanelekile ye- ukuhamba ngezinyawo. Imizila eminingana iqala emigwaqweni yayo. Isibonelo, lowo okhuphukela ku- Ingqungquthela yeXortà bedlula eCerro de los Parados. Noma futhi okuholela UCastell de Castells.
Yomibili le mizila yabelana ngohambo kuze kube I-Loma del Blocón, kepha bese umuntu eqhubekela ku Umthombo we-Yew, kanti enye ifinyelela kuCastell de Castells eshiwo ngenhla, lapho ungabona khona i- Indawo yama-Arcs nemidwebo yomhume I-Pla de Petracos.
Ngemuva kwalezi zindlela ezinamandla zokuhamba izintaba, isifiso sakho sokudla sizobe sesisebenzile. Edolobheni loMphakathi waseValencian unezindawo zokudlela ezikunikeza izitsha zazo ezijwayelekile.
Abanye babo yibo irayisi elinetheniphu nobhontshisi, the upelepele ogxishiwe, the unogwaja ali oli futhi i Imifino Ebhakiwe. Okunamandla ngokwengeziwe yi olleta de blat, enokolweni, ingulube, amazambane, u-anyanisi, utamatisi, amakhakhasi nobhontshisi, konke kuphekwe ebhodweni lesintu.
Ngokwengxenye yayo, i mincho uhlobo lwe-pizza olunemifino, inhlanzi namakhukhamba, kanti i- amabhola ommbila Zifana namabhola enyama, yize engenayo inyama kodwa amazambane aphekiwe, isinkwa namaqanda.
Ungafika kanjani edolobheni
Noma kukhona ifayela le- ulayini webhasi efinyelela edolobheni lase-Alicante, indlela engcono yokufika lapho ngemoto. Uma usuka e- Benidorm noma kusuka e-Alcoy naseCocentaina, umgwaqo okufanele uwuthathe yi I-CV-70. Ngakolunye uhlangothi, uma usuka e-Altea, umzila ongcono kakhulu yi- I-CV-755.
Yisiphi isikhathi esihle sokuvakashela eGuadalest
Indawo yaseGuadalest inesimo sezulu sohlobo IMedithera, ngobusika obumnandi namahlobo ashisayo. Kodwa-ke, njengoba idolobha lisendaweni ephakeme cishe ngamamitha angamakhulu ayisithupha futhi lizungezwe izintaba, isimo sezulu sihluke kancane. Ngakho-ke, ubusika bayo buyabanda kanti ihlobo limnandi ngokwengeziwe ngokushisa.
Ngakho-ke, isikhathi esihle kakhulu sokuvakashela eGuadalest ngu ehlobo. Ngaphezu kwalokho, maphakathi no-Agasti zabo imikhosi ukuhlonipha i Intombi Yokwenyuka, ngalo leli dolobha liphethwe kakhulu.
Ekuphetheni, IGuadalest kunokuningi angakunika kona. Yidolobha elihle eligobe eweni futhi elibuswa yinqaba yalo futhi lineminyuziyamu enelukuluku kakhulu namathafa amahle. Uma kukho konke lokhu ungeza i-gastronomy enhle, unazo zonke izakhi zokwenza ukuvakasha kwakho kube kuhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » IGuadalest
Umthombo womfula iMundo